कस्ता मान्छेमा भरोसा राख्ने ? भरोसा योग्य मानिसका ८ लक्षणहरु यस्ता हुन्छन् (एक प्रेरक कथा सहित) - उज्यालो पाटो
जीवन भोगिरहदा, यात्रा गरिरहदा, बाटो हिडिरहदा, हामी कयौँ मान्छेसँग भेट्छौ, भलाकुसारी गर्छौँ, आत्मीयता देखाउँछौ, आफ्नोपन बढाउछौँ । यस्तोमा धेरै मानिसहरु साथी बन्छन् । जीवनको वास्तविकता यस्तो हुन्छ कि केही मित्रताहरु क्षणिक समय टिक्छन्, केही मित्रताहरुले लामो समयसँग यात्रा गर्छन् ।
तर, मानिसका केहि बिशेषताहरुबारे थाहा पाउँन सकिन्छ । केहि भेटघाट र समय बिताए पछि मानिसको व्यवहार र सोचाइका बारेमा संकेतहरु हेरेर आफुले संगत गरेको मानिस भरोसायोग्य हो कि होइन भन्ने थाहा पाउँन सकिन्छ । कस्ता मानिसहरु भरोसा गर्न लायक छन् भन्ने थाहा पाउँन एउटा पुरानो कथा पनि उपयोगी हुन सक्छ । सो कथा यसप्रकारका छन् :
एउटा गुरुकुलमा शिष्यहरुलाई सम्पुर्ण शिक्षा दिइसकेको थियो । यो दिन उनीहरुको अन्तिम दिन थियो । गुरुकुलको एउटा परम्परा नै थियो कि अन्तिम दिन अन्तिम शिक्षा दिइन्थ्यो । त्यसैको तयारी चलिरहेको थियो । जब सबै शिष्यहरु कोठामा उपस्थित भए तब उनीहरुले गुरुको हात काठका केही खेलौनाहरुले भरिएको देखे ।
ति खेलौना देखाउदै गुरु बोल्न थाले, “यहाँ मसँग ३ वटा खैलौनाहरु छन् । तपाईहरुले यी खेलौना बिचमा अन्तर देखाउनु होला ।” गुरुको आग्रहपछि सबै शिष्यहरुले तिनै खैलौनाहरुलाई गहिरिएर हेरे । तिनैवटा खेलौना काठले बनेका थिए । तिनैवटा एकदमै उस्तै थिए । जसमा फरक छुट्याउन एकदम मुस्किल थियो । कसै गरेर पनि कुनै पनि शिष्यले ति खेलौनाहरुमा फरक थाहा पाउँन सकेनन् ।
त्यसपछि गुरुले थप जानकारी दिए, “यहाँ भएका ३ खेलौनाहरु फरक फरक छन् । यी मध्ये कुनै एक खेलौनाले त्यस किसिमका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ, जसलाई हामी भरोसा गर्न सक्छौँ र बाँकी दुई खेलौनाले ति मानिसहरुलाई संकेत गर्छन्, जसलाई भरोसा गर्न धेरै पल्ट सोच्नु पर्छ ।”
गुरुको कुराले शिष्यहरु झन् चकित परे । त्यसपछि यी खेलौनाहरुको अर्थ भनिदिन शिष्यहरुले अनुरोध गरे । गुरुले एउटा धातुको पातलो तार दिदै भने, “ल ! यस तारलाई त्यसमा हाल ।”
शिष्यले गुरुले जस्तो भनेको हो, त्यही गरे । त्यो तार एउटा कानबाट पसेर अर्को कानबाट निस्कियो । दोस्रो खेलौनामा तार कानबाट हाल्दा मुखबाट निस्कियो । अन्तिममा एउटा तार हाल्दा कहिँबाट पनि निस्केन ।
गुरुले आफ्ना शिष्यलाई सम्झाए, “यसरी नै जिन्दगीमा तिन किसिमका मान्छेहरु भेटिन्छन् । एक किसिमका मान्छे हुन्छन्, जो केही सुनाउँदा एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउछन्, यस्ता व्यक्तिसँग केही कुरा पनि साट्ने गर्नु हुदैैन । अर्को किसिमका मान्छे जो भनेका कुरा सुनेर अरुलाई सुनाउँछ, त्यस्तासँग गम्भिर कुरा गर्नु हुदैन । अर्को किसिमका मानिसहरु हुन्छन्, जसले कुराहरु पचाउँन सक्छन् । यस्तो व्यक्तिलाई आफ्ना कुराहरु सुनाउनु जस्ले केही बोल्दैन, त्यस्ता व्यक्तिसँग सल्लाह लिन सकिन्छ । यस्ता मान्छे हाम्रा तागत बन्न सक्छन् । यस्ता मानिस भरोसा गर्न लायक हुन्छन् ।”
यो त भयो कथाले दिएको सन्देश । व्यवहारिक रुपमा पनि भरोसायोग्य मानिस थाहा पाउँन असम्भव नै भने हुन्न । माथि नै भने जस्तै मानिसले आफ्नो व्यवहार र जीवनशैलीमा आफ्नो विशेषताबारे केहि न केहि संकेत वा लक्षणहरु देखाउँछ । तिनै लक्षणहरुको हिसाबबाट हामी आफुले संगत गरेको मानिस भरोसायोग्य छ कि छैन भन्ने थाहा पाउँन सकिन्छ । यहाँ त्यस्ता ८ वटा लक्षणहरुका बारेमा लेखेको छु । कृपया, मन परे सेयर गर्नुहोला ।
१. गल्ति औँल्याउँछ
भरोसायोग्य मान्छे चाप्लुसी गर्दैन । चाप्लुसी गर्ने मानिस भरोसायोग्य होइन । चाप्लुसी गर्नुको अर्थ उसको फाइदाका लागि सेवा गर्दैछ भन्ने हो । जो मानिस स्वार्थ बिना संगत गर्छ, त्यसो मानिसमात्र भरोसायोग्य हुन्छ । त्यस्तो मानिसले तपाईले गल्ति गर्दा पनि तपाईको प्रंशसा गरेर बस्दैन । बरु गल्ति भयो भनेर जानकारी दिन्छ ।
उसले दिने जानकारी प्रत्यक्ष तपाईसँग भन्नेछ वा तपाईले बुझ्ने गरि संकेत गर्ने छ तर तपाईको गल्ति सार्वजनिकरुपमा भन्दैन । उसले हेक्का राख्छ कि तपाईको गल्तिका कारण तपाईले लज्जित, अपमानित हुन नपरोस् । तपाईको प्रगतिको लागि तपाईको गल्ति औँल्याइदिन्छ ।
२. गल्ति सच्याउँछ
कुनै कारणवश तपाईले गल्ति गरिहाल्नु भएको छ भने उसले सो गल्तिलाई त्यसै छोडिदिदैन । तपाईको गल्तिलाई उसले सकेसम्म सच्याएर तपाईलाई सुधार्छ वा तपाईलाई सजिलो बनाइदिन्छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईको सबै गल्तिहरु सच्याएर तपाईलाई उ प्रति निर्भर बनाउँछ, बरु उसले तपाईको गल्ति सच्याउँछ र त्यसबारे तपाईलाई जानकारी दिन्छ, ताकि अर्को पल्ट तपाईले सोही गल्ति नदोहोर्याउँनुहोस् ।
३. माफी माग्छ र माफी दिन्छ
भरोसायोग्य मानिसको मात्र होइन, माफी माग्ने र माफी दिने विशेषता त्यस्ता मानिसहरुको लक्षण हो, जसमा आफ्नो गल्तिको जिम्मेदारी लिन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ र अर्काको गल्तिलाई बिर्सिदिने भावना हुन्छ । गल्ति सबैले गर्छन् तर गल्ति लुकाउँने गल्ति मुर्खले मात्रै गर्छ भने अहंकारीले मात्रै अर्काले माफी माग्दा माफी दिदैन । जीवनमा कुनै पनि हालतमा मुर्ख र अंहकारीको भरोसा गर्नु हुदैन ।
आफ्नो गल्तिप्रति माफी माग्ने र अर्काले गल्तिमा माफी माग्दा मनमा अलिकति पनि द्धैष भावना नराखी माफी दिने मानिसलाई भरोसा गर्दा जीवनमा अफ्ठ्याराहरु कम हुन्छन् । मनको तनाव कम हुन्छ । सम्बन्ध सुन्दर हुन्छ ।
४. आवश्यक पर्दा उपस्थित हुन्छ
कोही कोही संगत स्वार्थको हुन्छ । कुनै विशेष समय वा प्रयोजनमा मात्रै ति तपाईको वरिपरी हुन्छन् । तिनलाई भेट्ने बित्तिकै भोज चाहिन्छ वा रमाइलो हुनु पर्छ तर ति आवश्यक पर्दा भने अनेक बहाना बनाएर तर्किन्छन् । यस्ता विशेषता भएका मानिसहरुसँग संगत छ भने संगत टुंग्याउँदा नै राम्रो हुन्छ ।
तर जस्तो सुकै विपदमा होस् या खुसीमा होस्, उपस्थित हुने र सकेको मद्दत गर्ने वा मद्दत गर्न अग्रसर हुने संगतलाई भने भरोसा गर्नु पर्छ ।
५. कुरा सुन्छ
आफ्नो मात्रै महिमा गाएर बस्नेहरुले तपाईको मनलाई नै भारी बनाइदिन्छन् । त्यस्ता मानिसहरुको भरोसा गर्नुहोस् जो तपाईको कुरा सुन्छ । जसले तपाईको बोलीको महत्व बुझ्छ ।
६. मेरो एउटा साथी छ
तपाईमा आफुले संगत गरेको मानिसप्रति विश्वास हुन पर्छ । कुनै पनि बेला आफुलाई अफ्ठ्यारो परे तपाईले मेरो एउटा साथी छ भनेर सम्झन विश्वास कमाएको मानिसलाई भरोसा गर्न सकिन्छ । उसले पक्कै पनि विगतमा केहि विशेष गुणकै कारण तपाईको विश्वास जितेको हुन सक्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।
७. प्राथमिकतामा तपाई
उसको प्राथमिकतामा तपाई पर्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले कोही व्यक्तिलाई भरोसा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । यदि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तपाई प्राथमिकतामा पर्नु हुन्न वा तपाई भन्दा उसको लागि महत्वपुर्ण कुरा अरु नै छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भरोसा गर्नु हुदैन । कुनै परिस्थिति वा समय विशेष भए कुरा अर्कै हुन्छ तर सामान्य अवस्थामा पनि तपाईको महत्व नबुझ्नेलाई पटक्कै भरोसा नगर्नुहोस् ।
८. सुधार गर्न बल गर्छ
असल मानिसले तपाईको प्रगति चाहन्छ । तपाईलाई थप सुधार्न चाहन्छ । तपाईको प्रगतिको लागि चिन्तन गर्छ, छलफल गर्छ र प्रेरणा दिन्छ । त्यस्तो मानिसलाई भरोसा गर्नु लाभकारी हुन्छ ।